Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze dị njikere iwepụta mmekọrịta ọha na eze | Martech Zone
Fraịde, Ọgọstụ 21, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Site na ọkwa ikpeazụ m slam egwu Brody PR, I nwere ike iche na m bụ onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nke na-akpọ ụlọ ọrụ PR asị. Nke ahụ enweghị ike ịga n'ihu n'eziokwu ahụ. A gaara m edebe blọgụ ọfụma gbasara ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ha mere otu ihe ahụ.
Kyle Lacy ewerewo ya a kwụpụ n'ihuikwu,
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ mmekọrịta gị na ọha anaghị ede, na-ekwu okwu, ma na-akụziri ndị ahịa ha otu esi eji usoro mgbasa ozi maka njikwa akara ma ọ bụ nkwukọrịta? gbaa ha oku n’ebe ahu.
Na nkwanye ùgwù niile, ekwenyeghị m Kyle.
Agha ahụ adịghị n'etiti mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze na Social Media, m ka na-ahụkwa nka nke mmekọrịta ọha na eze na-eweta na tebụl. Ọ dịghị ọkachamara mgbasa ozi mmekọrịta (na m ga-agbagha ha niile) dị njikere ịkwado ndị na-ajụ ndị a mma karịa ụlọ ọrụ PR nke na-aghọta otu esi ekwupụta okwu na nkwukọrịta nke ọma na ọha na eze, na-arụ ọrụ na offline
Otu ihe anyi bu ndi mmadu no na mgbasa ozi na-echefu bu na anyi no na ndi pere mpe. Mmekọrịta ọha na eze bụ nnukwu mmadụ - ka na-adọta ụdọ na ịtọ ụda maka ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa. Ndị ọrụ mmekọrịta ọha na eze ka na-aga n'ihu na-enweta nnukwu nsonaazụ maka azụmaahịa ha ma bụrụ nnukwu ego maka ụlọ ọrụ. A na-azụ ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na nkwukọrịta dị irè, ndị na-ajụ ase, ụzọ aghụghọ, wdg. Ha bụ ụfọdụ ezigbo ndị amaala!
M n'eziokwu na-eche na Social Media posse na-eche na-emebiga ihe ókè na ndị na-ajụ ase na mkpa anyị. Nnukwu ndị ahịa na-arụ ọrụ na azụmaahịa, ozi ziri ezi, ahịa nchekwa data na mbipụta ndị nakweere mgbasa ozi mmekọrịta na-arụ ọrụ na oghere n'ihi na ọ dị mfe iji, dị mfe iji tụọ, yana ọnụ ala ịgbanwe ụzọ na ofufe.
Agha dị n'etiti ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze kwesịrị ịga n'akụkụ na ụmụ nwoke na ụmụ mmadụ na-elekọta mmadụ dị ka Kyle na m kwesịrị ịnakwere ha, nyere ha aka, ma mụta ihe n'aka ha. Ana m atụ anya ịkụziri ndị ọrụ PR na ndị na-ajụ ase, akpaaka na nyocha nke ndị mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike inye kemgbe, ozugbo ha weta ya, ha ga-ahụ nsonaazụ ndị ha ga-enweta na ya na afọ ojuju ọ na-enye ozugbo.
Nke ahụ bụ 2 cents na mmekọrịta ọha na eze na Social Media!
Foto nke Kyle site na Aha ya bụ Kyle Weller.
Tags: Nwachukwuprmmekọrịta ọhanezeelekọta mmadụ media
Aug 21, 2009 na 8:58 PM
Foto ahụ nke Kyle dị egwu! haha.
Ekwenyere m. Ike gwụrụ m na "ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi" na-etinye oge dị ukwuu na-anwa ime ka onye ọ bụla kwenye na mgbasa ozi mmekọrịta bara uru. Ndi mmadu kwesiri ima ugbua. Mgbe ụfọdụ ọ na - adị ka a ga - asị na anyị na - agbachitere onwe anyị tupu mmadụ enye anyị nsogbu iji igwe mmadụ. Aga m etinye obere oge na-ekwusi ike na oge ka ukwuu na-eweta nsonaazụ maka ndị meghere anya ha.
Aug 21, 2009 na 5:24 PM
Izizi, daalụ maka iji ihe osise ahụ. Ọ bụ otu n'ime akụ ndị zoro ezo na ebe a na-ahụ maka eserese. Nke abuo, achọrọ m ime ka o doo anya na anaghị m emegide mmekọrịta ọha na eze ma ọlị. Ekwenyere m na pr ka na-arụ nnukwu ọrụ na atụmatụ nkwukọrịta. Naanị m na-anwa ịkọwapụta na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ mmekọrịta gị na ọha na-adịghị opekata mpe nyochaa ikike nke iji usoro mgbasa ozi ha anaghị eme ndị ahịa ha ikpe ziri ezi. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ka Blast Media na Indianapolis ndị na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Have ga-anabata thentanetị maka nkwurịta okwu ahụ dị oke mkpa. Anyị na-anwa ime ka ndị mmadụ zaa ajụjụ.
Ezi post, Doug. Ana m arịọ mgbaghara maka edemede ọ bụla nke a na-ede na iPhone m.
Aug 21, 2009 na 9:47 PM
Achọrọ ezigbo mkparịta ụka na PR n'ihu, Kyle. A na m ekwe ka Brody nwee ya na ọkwa ikpeazụ ahụ yabụ achọrọ m ịgbapụta onwe m ntakịrị.
Ọ bụ ihe dị egwu eserese! Achọtara m ndị ọzọ dị mma,…. tumadi onye gi na ya gbara n'ukwu nwanyi… amaka. Ọ fọrọ nke nta ka m jiri ya! Ihe onyonyo Google bu IHE OMA!
Aug 21, 2009 na 9:26 PM
Ebum n’uche ka m bido blog nke di nma nke akpọrọ “Ihe amutara” ka ndi ọzọ rite uru. Daalụ maka ikwe ka m tinye ọnụego gị. Nke a bụ njikọ na post, http://brodypr.blogspot.com/
Enwere m ekele maka nzaghachi gị.
Aug 21, 2009 na 5:33 PM
Robby. Ghaghi iju. M ka na-eche na i kwesịrị ịrụ ụka onwe gị. 🙂
Aug 21, 2009 na 9:29 PM
Nke a bụ otú otu mmekọrịta ọha na eze nke America (PRSA) si akọwa PR:
Mmekọrịta Ọha bụ usoro njikwa, nlekọta, na ọrụ teknụzụ nke na-akwalite ikike nke nzukọ ige ntị nke ọma, inwe ekele na ịzaghachi ndị ahụ mmekọrịta mmekọrịta ha na nzukọ ahụ dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ ga-emezu ebumnuche ya na ụkpụrụ ya.
Nkọwa a sara mbara n'ụzọ ọchị. Ọ na-egosi na ezubere PR iji "kwalite nkwukọrịta usoro" na onye ọ bụla dị mkpa na nzukọ. Ma ị gaghị enwe ike iru ihe mgbaru ọsọ a n'ọtụtụ. Ndị ọrụ ọ bụla, ndị ahịa ọ bụla, mmadụ ọ bụla nwere ike ikwu maka ụlọ ọrụ gị oge ọ bụla ha chọrọ. PRlọ ọrụ PR enweela mmetụta dị ukwuu na nghọta ọha na eze site n'iji akọ na-akọ usoro mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi. Nbuli nke olu ndi mmadu n'otu uzo nke mgbasa ozi ndi mmadu bu ihe omuma a na-enweghi ike igbochi. Otu ụlọ ọrụ enweghị ike inwe olile anya iji ndị ọrụ PR zuru oke iji soro ọtụtụ nde mmadụ na-ekwurịta okwu.
Nke ahụ apụtaghị na PR enweghị uru. Nanị, na PR dị ka "ọrụ atụmatụ" nwere naanị uru na ụwa ebe mgbasa ozi na-achịkwa echiche ọha mmadụ. Anyị ka bi n'ụwa ahụ, mana ọ na-anwụ ngwa ngwa. Netwọk telivishọn, ụlọ ọrụ redio na akwụkwọ akụkọ na-ada ebe niile.
Ihe kachasị mkpa bụ na PR maara na ọ na-ada ada. Dabere na Edelman 2009 Trust Barometer (http://www.edelman.com/trust/), ”Target =” _ blank ”> www.edelman.com/trust/), 77% nke ndị America tụkwasịrị obi ụlọ ọrụ Mpekarị karịa otu afọ gara aga. Ha na-ekwukwa na ọ bụ naanị 26% anyị tụkwasịrị obi na nkwupụta ụlọ ọrụ. Ma n'ụzọ-Edelman bụ ụlọ ọrụ PR kachasị ukwuu n'ụwa!
Ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ike ịnweta naanị 1/4 ka anyị tụkwasị ha obi, ha ga-abụrịrị ọdachi na ọrụ ha. Cheedị ma ọ bụrụ na naanị ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị 1/4 tụkwasịrị gị obi. Ikekwe ụzọ ziri ezi maka ụlọ ọrụ iji wulite ntụkwasị obi ma soro ndị mmadụ kwurịtara okwu abụghị site na mkpịsị okwu akpakọtara ọnụ nke ndị fol PR, kama site n'ịgba ndị ọrụ ume ka ha gwa ndị mmadụ n'ezie ihe na-eme. Nke ahụ nwere ike ịmalite mmekọrịta bara uru, kama ịbụ otu nke na-enweghị atụ.
Aug 22, 2009 na 5: 17 AM
Echere m na mmekọrịta ọha na eze na-arụ nnukwu ọrụ yana ọ dịkwa mkpa. ọtụtụ kwuru bụ ebe a maka arụmụka nzube. ekwenyere m kpamkpam na ha kwesịrị inwe nrụrịta ụka banyere isiokwu a. nwere ike ịbụ na anyị nwere ike ịmalite arụmụka ebe a na post a site na nkwupụta. nke mere na enwere ike inwe mkparịta ụka dị mkpirikpi n'etiti anyị niile… nke ọma ya ọmarịcha ọkwa yana eserese .. jisie ike
Aug 25, 2009 na 6: 02 AM
Ọfọn, nyere olu nke ozi ahịa (nke 90% bụ ihe mkpofu) nke ndị ahịa na azụmaahịa na-atụba, ọ bụ naanị ihe ziri ezi ịtụ anya ndị nwere obi abụọ ma mgbasa ozi mmekọrịta ọ na-arụ ọrụ maka azụmahịa ha. Ọ gwụla ma ngwaahịa gị etinyere aka na igwe mmadụ na mgbasa ozi mgbasa ozi ahụ, ọ ga-agbasi mbọ ike iji dọpụta ihe ọ bụla, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ obere nwa nwere akara a na-amaghị ama.
Sep 23, 2009 na 7:43 PM
Obere oge na nnọkọ oriri na ọ partyụ ,ụ ahụ, mana nnukwu post Doug (na onye dị umeala n'obi na-enye ume ọhụrụ ịhụ n'aka otu ndị ọkachamara). Ekwenyere m, esemokwu ahụ kwesịrị ịhapụ ya; enwere ụfọdụ ohere dị ukwuu ebe ahụ. Ana m arịọ mgbaghara n'ihu maka ịbụ onye na-achọ ọdịmma onwe m, mana anyị (RSW / US) ka mechara nyochaa, Alọ ọrụ 'na ndị ahịa' lekwasịrị anya na mpaghara Social / Digital, nke na-agbakwunye ọkwa gị nke ọma. Kpọmkwem, otu n'ime nchoputa:
N'ime usoro ọrụ azụmaahịa abụọ bụ isi a nyochara, ọ dị ka ụlọ ọrụ PR nwere ụkwụ n'ụkwụ maka ikike / ahụmịhe ha na njikwa njikwa nke mgbasa ozi mmekọrịta. 60% nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ekwu na ha na-atụle usoro mgbasa ozi mmekọrịta ma e jiri ya tụnyere naanị 49% nke Alọ Ọrụ Mgbasa ozi na 45% nke ndị ahịa.
Mara na ntakịrị data adịtụghị na mpaghara, mana ị nwere ike ibudata nyocha ebe a: http://www.rswus.com/main/indexsurvey.php Na-atụ anya iso blog gị.
Sep 24, 2009 na 2: 51 AM
Nke a bụ nnyocha dị egwu ma ekenyela m ya ndị ahịa ole na ole na ndị ọrụ ibe! Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta ya.